काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गरेको आरोप लगाएको छ । बिहिवार काठमाडौमा समसामयिक अर्थ राजनीतिको समीक्षा गर्दै कांग्रेसले सरकारले हावादारी कुरा गरेकाले समृद्धिको सपना पूरा नहुने समेत दाबी गरेको छ । सरकारले जनचाहना विपरित काम गरेको भन्दै गलत कामको सशक्त प्रतिवाद गर्न काग्रेस शीर्ष नेताहरुले कार्यकर्तालाई […]
राष्ट्रियसभाका संसदीय समिति सभापतिहरुको निर्वाचन भदौ १३ गते हुने
काठमाडौ । राष्ट्रियसभाका संसदीय समिति सभापतिहरुको निर्वाचन कार्यतालिका हेरफेर भएको छ । बिहिवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले कारणबस मिति हेरफेर गर्नुपरेको जानकारी दिनुभयो । यसअघि भाद्र तीन गतेका लागि तोकिएको संसदीय समितिहरुको निर्वाचन १३ गतेका लागि सारिएको छ । तीन गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनका लागि सचिवालयले तालिकासमेत सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअघि […]
काठमाडौं । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको मुलुकी फौजदारी संहिताका गोपनीयता र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी महलका प्रावधानले सञ्चार माध्यममाथि कडा अंकुश लगाउने भएको समाचार आजको कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । आमसञ्चारका कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीले कसैको गोपनीयता भंग गरेमा वा त्यसबाट कसैको गाली बेइज्जती भएको ठहर भएमा पत्रकाररसम्पादक र […]
रामहरि/नुवाकोट । नुवाकोटको म्यागङ गाँउपालिका वडा नं. २ बुङताङबाट त्रिशुलीतर्फ आउदै गरेको बस विदुर नगरपालिका वडा नं. ९ लामाटारमा आज दुर्घटना हुदाँ ५७ जना यात्रु घाइते भएका छन् । दुर्घटना गम्भीर घाइते भएका आठ जनालाई जिल्ला अस्पताल त्रिशूलीमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ । बुङताङबाट त्रिशूली आउन लागेको बा.२ ख २८०४ […]
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गएको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खुद नाफा कमाएको छ ।प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन हुने प्रक्षेपण गरेको थियो तर यो रकम अझै बढ्न सक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो । गएको आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको सञ्चालन मुनाफा […]
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न नेता तथा चर्चित व्यक्तिको फोटो बिगारेर सार्वजनिक गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने भएको छ । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर १ भदौदेखि लागू हुने अपराध संहिताले यस्तो व्यवस्था गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९५ को […]
काठमाडौं । स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पूर्ति गर्न नसकिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लोकसेवा आयोगबाट हुने सबैखाले पदपूर्ति रोक्ने तयारीमा लागेको छ । तीन वर्षसम्म लोकसेवाबाट खुला र आन्तरिक पदपूर्ति रोक्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ । मन्त्रालयको तयारीमा कर्मचारी भने सशंकित भएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको […]
काठमाडाैँ । सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेको छ। तीन वर्षे कार्यकालका लागि २०७३ असोजमा नियुक्त भएकी राजभण्डारीलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको हो। केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि उनलाई दुई पटक स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । सरकारलाई राजभण्डारीले दिएको जवाफ चित्त नबुझेकोले पदबाट हटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना […]